Blog Chiito Zuva: Mvura uye Oiri | Martech Zone
Muvhuro, October 15, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ini handisi wezvakatipoteredza. Kana ini handisi mutsigiri we "Chisinganzwisisike Chokwadi". Iyo data vanofungidzirwa uye ndinofunga kuzvikudza kwevanhu kunotenda kuti zviito zvedu zvakaipa zviri neimwe nzira kuuraya Nyika. Pasi harisi mumatambudziko… vanhu variko.
Ndinoda kutyaira mota yemagetsi, asi ndinoziva kuti hazvina basa uye vachiri, pakupedzisira, vanopisa mafuta. Ndinoda kutyaira mota inoshandisa mamwe mafuta, asi ndinoziva kuti kugadzira iwo mafuta hakuna basa uye… pakupedzisira kunopisa mafuta. Pamwe hybrid ndiyo mhinduro yakanakisa, asi ini ndinonetsekana kuti mabhatiri anoenda kupi uye zvinokanganisa zvinwiwa zvinoshandiswa.
Ndinoona kuti kuzvitutumadza kuri kukonzeresa kupokana kwepasirese, nyaya dzehutano, nedambudziko remagetsi pazvinodzivirika. Ndinoda kufamba panze nekunhuwa mweya wakanaka. Ndinoda kukwanisa kushanyira makomo uye kusaona marara. Ndinoda kuona tichishandisa mari shoma pakutsvaira. Uye, hongu, ndinoda kuti United States igure kutsamira kwayo pamafuta uye nyika dzeArabhu.
Kuti ndiite izvozvo, zviri kwandiri kuti ndiite mutsauko. Vanhu vanoti zvematongerwo enyika zvese zvinotangira kumba. Ndinogona kupokana kuti simba rese rekuchengetedza simba rinotangira kumba. Mari inoshandiswa pamabhodhoro epurasitiki, marara uye simba zvinongoraswa uye izvo zvinoita kuti mukomana anochengetedza seni ade kutsigira 'girini'.
Semunhu anoda zvekunze, ini handidi kuona marara uye marara evhu anotora kubva patsvarakadenga yenyika yedu. Iniwo handidi kutiona tichifanira kurwa hondo kuti tisimbise mafuta edu.
Asi ndingaite sei mutsauko? Hezvino zvinhu zvitatu zvandingaite (uye iwe unogona, futi!):
Reka kutenga mvura yemumabhodhoro. Ini ndinotenga makesi kumba uye ndoona marara angu anogona kuzadza nekukurumidza uye nekukurumidza. Ndiri kuenda kunoshandira kumba uko mvura inoendeswa mumajugs anoshandiswa zvakare. Ndiri kutya kuti handikwanise kufamba kunotora mvura, mvura iri munharaunda yangu inonhuwa uye inosiya ngura pane zvese.
Ndiri kuenda kunotenga kumusika wevarimi vemuno. Wanga uchiziva here kuti avhareji yemuriwo kana muchero unofamba makiromita chiuru nemazana masere kuenda kune yako ndiro. (Kunobva: Hupfumi Hwakadzika). Kufambisa kwepurazi kune canneries kana kurongedza zvirimwa, wozoenda kuzvitoro, mutengi mukuru wemafuta munyika medu. Uye zvechokwadi zvinokuvadza murimi nekuti mari yekufambisa yakatemwa kubva pamutengo. Tsigira musika wevarimi vemuno uye vanowana mari yakawanda uye isu tinoshandisa mafuta mashoma!
Chinja thermometer yako uye bvumidza madhigirii mashanu mune chero nzira - zvese zvinopisa uye zvinotonhora. Nei uchishandisa yakawanda mhepo yekupisa kana kupisa? Chinja mbatya dzako mukati kuti upe nyaradzo yako… usashandise simba rakawanda.
Ndiri kutanga nhasi. Ndinovimba iwe unodaro, futi!
Tags: Comcash Nzvimbo yekutengesaemail mhindurooptimizationmungoro yekutengerakusiya ngoro yekutengesamitsara yemusorowp_posts
Gumiguru 15, 2007 na2: 39 PM
Yakakura posvo, Doug. Ini ndagara ndiri mutendi mukuita izvo zvaunogona uye kwete kusimuka kunze. Ini ndinogara ndichitenga nyowani pandinogona b / c ine hutano, inotsigira murimi / hupfumi hwenzvimbo uye handina kana kumbofunga nezvazvo kudzikisa kutakura. Ini ndachinjira kune Brita chirongo panzvimbo pemabhodhoro emvura, zvakachipa pane sevhisi yekumba uye haufanire kunetseka nezvekuendesa. Chinjana shandura firita yako kwemwedzi yakati wandei uye rangarira kuzadza jagi remvura risati rapera. Zvinotora maminetsi kusefa.
Ini ndinoshandisawo magetsi anoshanda magetsi. Ndichiri kungochinjira kumabhuru aya, marepoti uye nevanhu vandinoziva vanovashandisa vanotaura kuti vachatema madhora akati wandei kubva pagore renyu remagetsi uye ivo vari nani kune nharaunda b / c kwete marara mazhinji anogadzirwa kubva mukuchinja mababu uye vanoshandisa mashoma simba.